လွမ်းနေတဲ့ မနက်စာများ « ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း
“သားငယ်ရေ… ထပါတော့… စားတော်ပဲသည်စောင့်ပေးပါဦး… မေမေ နောက်ဖေးမှာ ဟင်းချက်နေတော့ မကြားလိုက်ပဲလွတ်သွားမှာစိုးလို့ပါ…”
ကျွန်တော်က အဲသည်လို ၄-၅ ခါလောက်နှိုးမှထပါတယ်။ နောက်ဆုံး မရမကနှိုးတော့မှ “ဟုတ်ကဲ့… ” ဆိုပြီး မထချင်ထချင်နဲ့ ထလာပြီး စားတော်ပဲသည်အလာကိုစောင့်ပါတယ်။
ပဲပြုတ်သည် အော်သံကြားတော့မှ ပဲပြုတ်သည်ကိုခေါ် ပြီးတော့ နောက်ဖေးကိုလှမ်းအော်ပါတယ်…
“တစ်ကျပ်ခွဲဖိုးထည့် အေ… ”
“ညည်းထည့်ပေးတဲ့ ပဲပြုတ်ကလည်း နဲနဲလာပြီ…”
“အေးအေး… ဒါဆိုလည်း နှစ်ကျပ်ဖိုးထည့်လိုက်ပါ…”
မနက်စာကို ထမင်း နဲ့ ပဲပြုတ် ကို ဆီရွှဲရွှဲလေးဆမ်း ပြီးတော့ ငပိကြော်၊ ငါးခြောက်ကြော်၊ ငါးခြောက်ဖုတ်၊ နောက်ပြီး ရာသီကိုလိုက်ပြီး တခါတလေ ဆီးဖြူသီး ဆားရေစိမ်၊ သရက်သီးဆားရေစိမ်၊ အိမ်လုပ် သရက်သီးသနှပ် တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲပြီးစားလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတရံလည်း ကြက်သွန်အနီကို လှီးပြီး ထမင်းထဲထည့်စားပါသေးတယ်။ ထမင်းကြမ်း ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာ စားတော်ပဲပြုတ်ကို ကြက်သွန်၊ ဆနွင်း နဲ့ ထမင်းကြော်ပြီး ငပိကြော်လေးနဲ့တွဲစားလိုက်ရတာ အင်မတန်မှ စားလို့မြိန်ပါတယ်။
“သားငယ်ရေ… မေမေကို မနက်စာ အကြော်ဝယ်ပေးပါဦး…”
“သားငယ်… မြန်မြန်ထတော့ကွာ.. ကျောင်းနောက်ကျလိမ့်မယ်… ” အဲလို အသံလေးနဲနဲမာနဲ့ အတင်းနှိုးတော့မှ
ဆိုပြီးထခါ မျက်နှာသစ်၊ အကြော်ဝယ်ဖို့ ချိုင့်ကိုယူ၊ စက်ဘီးထုတ်…
“ကြော်ပြီးစ ပူပူလေးဖြစ်တဲ့ အကြော်သာဝယ်ခဲ့… တစ်ယောက်ကို နှစ်ခု၊ နှစ်ကျပ်ဖိုးဝယ်ခဲ့… အပိုရမလားလို့မေးနော်…”
အိမ်မှာက များသောအားဖြင့် မိသားစုလေးယောက်ပဲရှိတတ်တော့ တစ်ယောက်ကို နှစ်ခုနှုန်း၊ အကြော်က တစ်ခုတမတ်၊ နှစ်ကျပ်ဖိုးဆို ရှစ်ခုရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ခုနှစ်လောက်အထိပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့ အကြော်တွေလည်း ငါးမူး၊ တစ်ကျပ်၊ နှစ်ကျပ်၊ ငါးကျပ်…နဲ့ တဖြည်းဖြည်းဈေးတက်သွားတာ၊ အခုဆိုဘယ်လောက်တော်ဖြစ်နေပြီးလည်းမသိဘူးနော်။
“သားငယ်ရေ…. မေမေ့ကို မုန့်များသလက်နဲ့ အကြော်ဝယ်ပေးပါ။ ဒီနေ့ မုန့်များသလက်နဲ့ အကြော်သုတ်စားမယ်။ သားတို့အိပ်နေတုန်း စားတော်ပဲကို ၀ယ်ထားပြီးပြီ…”
“မုန့်ပျားသလက် ငါးခုနဲ့ အကြော် ရှစ်ခုဝယ်ခဲ့… အမေ့ ဈေးသွားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ တစ်ဆယ်တန်ရှိတယ်.. ယူသွားလိုက်…”
တခါတလေမှ လာတတ်တဲ့ မုန့်ရေ (ရေမုန့်) သည် အသံများကြားလိုက်ရင်…
“သားရေ… အကြော်လေးပြေးဝယ်လိုက်ပါဦး… မေမေ မုန့်ရေ ၀ယ်ထားတယ်…”
မနက်စာတိုင်းမှာတော့ နွားနို့စစ်စစ် မလိုင်အပြည့်နဲ့ဖျော်ထားတဲ့ ကော်ဖီကတော့ မပါမဖြစ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကော်ဖီကို စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်ဖြစ်ခဲ့တာ… အခုအချိန်အထိ ကော်ဖီဖြတ်မယ်လို့ (ပုံရိပ်လို) တခါမှ အတွေးထဲမရောက်မိပါဘူး။
အညာမှာ ကျောင်းပိတ်ရက်များတွေ မှာစားတဲ့ မနက်စာကတော့ အင်မတန် အချိန်ကြာပါတယ်။ မနက်စာစားပြီး မိသားစုစကားဝိုင်းဖြစ်သွားရင် လက်က ထမင်းလုံးတွေခြောက်တဲ့အထိ တမေ့တမော ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ တခါတလေ မေမေဈေးသွားတာနောက်ကျလို့ နေ့လည်စာကို ရှိတာလေးနဲ့ချက်တဲ့ ရောက်ယားဟင်း (ဖြစ်သလိုချက်) နဲ့ပဲ စားရတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်….
ဒီကိုရောက်တော့ ရုံးဖွင့်တဲ့ရက်တွေဆို အိပ်ရာကထ ကမန်းကတန်းပြေးရတော့၊ အချိန်နဲနဲရရင် ဆိုင်မှာဝင် ဗလာကြာဇံကြော်ကို ကြက်ဥနဲ့စား၊ ကော်ဖီလေးသောက်ပေါ့… အချိန်မရရင်တော့ နေ့လည်စာနဲ့ပေါင်းစားပေတော့…
ရုံးပိတ်တဲ့ရက်ကျလည်း အိပ်ရာကမထ နေမြင့်အောင်အိပ်ပြီး နေ့လည်စာနဲ့ပေါင်းတဲ့ မနက်စာတွေလည်း များလှပါပြီ….
အဲလိုများတော့လည်း အညာက မနက်စာတွေကိုလွမ်းလာပါတယ်… လွမ်းလို့လည်းချရေးလိုက်တာပေါ့နော်….
မှတ်ချက် = ကိုပီတိ ဆိုတဲ့ ပုဂံညောင်ဦးသား အကိုတစ်ယောက် ရဲ့ အရေးသား ဖြစ်ပါတယ်.. 2007 တည်းက ကိုယ်ပိုင် ဆိုဒ်နဲ့ စာတွေ ကဗျာတွေ ရေးသားခဲ့ သူ .. ယခုထိလဲ ရေးသားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အညာမြေ အကြောင်း ပိုစ်များ နဲ့ ကဗျာများ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကိုပီတိဆိုဒ်သို့